PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - Isiguli sishise impama kunesi
Isiguli sishise impama kunesi
Sicikwe ukuhamba kancane kolayini
Ilanga langeSonto - 2018-10-07 - Front Page - SKHOSIPHI MTHEMBU
BASHIYE phansi amathuluzi, baduba ukusebenza abahlengikazi basesibhedlela Osindisweni, becasulwa yisiguli esivulele impama kuzakwabo.
Kusuke isidididi kulesi sibhedlela ngolwesine, kwadlula amahora angaphezulu kwayisihlanu iziguli zinganakiwe njengoba abahlengikazi bebeshaya phansi ngonyawo bethi ababuyeli emsebenzini izikhulu zingafikile ukuzolungisa le nkinga.
Kuze kwadingeka ukuba kubizwe umhlangano ophuthumayo nomphathi wesibhedlela obehlabe ikhefu emsebenzini, ukuzama ukulungisa isimo. Ngokuthola KWELANGA
Langesonto, kulesi sibhedlela kusukela ngomsombuluko kunenkinga yokungabi bikho kwabantu abakhipha amafayela eziguli.
Kuthiwa iziguli bezibhalelwa ephepheni imishanguzo okumele ziyithole ngaphambi kokuba ziyoyilanda. Kubikwa ukuthi lesi siguli esilashelwa ngaphandle, sicasulwe wukulinda isikhathi eside kulayini, sabe sesivulela ngempama kulo mhlengikazi obezama ukusisiza.
“Ngokujwayelekile, uma isiguli sizolanda imishanguzo, kuye kucelwe ikhadi laso okuyilona elisiza kutholakale ifayela. Kube sekubhalwa uhlobo lwemishanguzo okumele lunikwe isiguli. Inkinga esinayo lapha esibhedlela, akekho umuntu okhipha amafayela kusukela ngomsombuluko.
"Ngenxa yalokhu, iziguli beziphoqeleka ukuba zilinde isikhathi eside ngaphambi kokuthola usizo. Nangosuku lwesigameko, iziguli beziningi zizolanda imishanguzo, lesi esishaye umhlengikazi ngempama, ngicabanga ukuthi bese sihlale isikhathi eside silindile kulayini.
"Kube wukubuza nje ukuthi liphi ikhadi laso, sabuza umhlengikazi ukuthi ngabanjani ababhalelwa ephepheni imishanguzo maqede savulela ngezimpama ezimbili kumhlengikazi,” kusho umthombo. Uthi lokhu kucasule abanye abahlengikazi ngoba befuna ungqongqoshe wezempilo, udkt Sibongiseni Dhlomo, aphendule ngokuphepha kwabo.
“Uma kuvele ukuthi umhlengikazi ushaye isiguli, uxoshwa ngaso leso sikhathi, kodwa uma kushaywe umhlengikazi, kuyathuleka kube sengathi akwenzekanga lutho. Sifuna lusukunyelwe lolu daba futhi kuqinisekiswe ukuthi siphe-phile emsebenzini,” kulanda umthombo.
Umnu Ayanda Zulu, ongunobhala wenational Education, Health and Allied Workers’ Union (Nehawu), ethekwini Region, uthe babikeliwe ngalolu daba. Uthe kunomhlangano ophuthumayo ozoba khona phakathi kwabo nomnyango. Uthi sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukushaywa kwabahlengikazi yiziguli.
“Ngonhlaba (May) sahambisa uhlu lwezikhalo emnyangweni nezisebenzi zakulesiya sibhedlela. Ukuphepha kwabahlengikazi kwakungezinye zezinto ezazikhona ohlwini. Sifuna ungqongqoshe alusukumele udaba lokuphepha kwabahlengikazi. Into eyenza kube nolayini abade ezibhedlela, yingoba umnyango awufuni ukuqasha.
"Lokhu kuholela ekubeni abahlengikazi benze umsebenzi ongaphezu kwamandla abo bese kuba nolayini abade. Sifuna lezi zinkinga zilungiswe ngokushesha,” kusho yena.
Okhulumela umnyango wezeMpilo Kwazulu-natal, unkz Ncumisa Mafunda uthe: “Umnyango wethukile ngalesi sigameko, futhi uyakugxeka ukuhlukunyezwa nganoma yiluphi uhlobo kwezisebenzi zawo. Umnyango ngeke uphawule kakhulu ngoba lolu daba beluzobikwa kwabomthetho.
"Sifisa ukucacisa ukuthi akusilo iqiniso ukuthi kabekho abantu abakhipha amafayela kule ngxenye yesibhedlela. Ngeshwa ngosuku lwesigameko, bobabili abenza lo msebenzi abaphumelelanga ukuza emsebenzini. Zikhona izinhlelo ezazisetshenziswa ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi uyaqhubeka.
"Umnyango uyaxolisa ngokuphazamiseka kwesikhashana okubekhona esibhedlela, ufisa nokuqinisekisa ukuthi isibhedlela siyaqhubeka nokusebenza njengenjwayelo.”